Tim Berners-Lee auctions mbụ iyi koodu nke www | Site na Linux
Tim Berners-Lee (Ọkammụta sayensị kọmputa nke Britain na onye mepụtara Web) ga-etinye maka okushon koodu mmalite nke www dị ka akara aka na-abụghị fungible (NFT). Yabụ, nke a ga-abụ oge izizi iji kpebie itinye ego na-ahụ maka ihe a na-ahụta dị ka otu n'ime ihe kachasị egwu n'oge anyị.
Na mgbakwunye na koodu isi, A ga-erekwa akwụkwọ ozi sitere n'aka Berners-Lee n'onwe ya, faịlụ vekutu nke enwere ike ibiputa na posta, na vidiyo nkeji 30 nke gosiputara koodu nke Berners-Lee dere.
Maka ndị na-amaghị NFT, ha kwesịrị ịma na ha bụ ụdị akụ dijitalụ emebere iji gosipụta ikike mmadụ nwere nke ihe ọhụụ pụrụ iche, dị ka onyonyo na vidiyo n'ịntanetị.
Mgbe ha anọwo na n'ihi na a mgbe, na-abụghị fungible tokens (NFTs maka obere) malitere inweta traction n'oge March nke afọ a. Nke a bụ mgbe ụlọ ahịa Christie rere NFT artwork (ihe osise nke ihe osise site na omenka dijitalụ Beeple) na obere oge, ọ bụ Jack Dorsey, onye isi Twitter, onye rere akwụkwọ izizi ya maka $ 2.9 nde.
Mgbasa ahụ koodu mmalite nke web, akpọrọ "Nke a gbanwere ihe niile" ga - eme na London site na June 23 ruo 30, na auctions malite na $ 1,000. Sotheby's, ụlọ ahịa ndị ahịa si n'ọtụtụ mba Britain na America maka ọrụ nka na mkpokọta ga-achịkwa ya. Dabere na Sotheby's, ihe si na ahịa ahụ ga-erite uru nke Berners-Lee na nwunye ya ga-akwado.
NFT gụnyere faịlụ izizi izizi mbụ nwere:
Original Archive nke faịlụ na ụbọchị na oge nwere isi iyi koodu, dere n'etiti October 3, 1990 na August 24, 1991. A faịlụ nwere koodu na mkpokọta 9.555 edoghi, ọdịnaya nke nke na-agụnye implementations nke atọ mepụtakwara asụsụ na ogbugba ndu site Sir Tim; HTML (Asụsụ Mbupute Hypertext); HTTP na URI, yana akwụkwọ HTML mbụ nke gwara ndị ọrụ weebụ oge mbụ otu esi eji ngwa ahụ.
Na-ese okwu ngosipụta nke koodu a na-ede (vidiyo, oji na ọcha, ịgbachi nkịtị), yana oge nke 30 nkeji na 25 sekọnd.
Ihe nlere anya nke Vector Graphics (SVG) nke koodu zuru oke (A0 841mm obosara site na 1189mm ogologo), nke Sir Tim si na faịlụ izizi jiri Python mee ihe, ya na ihe osise nke akara aka ya na ala aka nri.
Akwụkwọ ozi edere na README.md faịlụ (na "markdown" usoro) nke Sir Tim na June 2021, na-egosipụta koodu na usoro okike ya.
Faịlụ ndị NFT kpọtụrụ aha nwere koodu nke ihe dịka 9.555 ahịrị, Sotheby na-akọwapụta.
Tim Berners-Lee dere ngwa ke Ekwesịghị C mmemme asụsụ na-eji a na-esote kọmputa na-eme ya.
Ma ọ bụ ya enwere ike inwe "enweghị ngwụcha" ọtụtụ akwụkwọ nke ihe dijitalụ, mana naanị otu nwere otu NFT. Nke a pụrụ iche nwere ike inye uru onye nchịkọta ihe ahụ, dị ka stampụ nkịtị na ederede na-adịkarị ụkọ.
The iyi koodu na-auctioned ga-ugbu a naanị aka oyiri nke na-akpata koodu maka ụwa mbụ nchọgharị. N’echiche, ihe ahụ bụ ihe pụrụ iche. Nke a ga-abụ nke mbụ na Berners-Lee ga ego capitalize na ihe a na-ewere otu nke kasị ukwuu mepụtara nke oge anyị.
"Afọ iri atọ gara aga, emepụtara m ihe, site na enyemaka ndị na-esote nke ọtụtụ ndị na-emekọrịta ihe gburugburu ụwa, bụ ngwa ọrụ dị ike maka mmadụ," Berners-Lee kwuru na nkwupụta o kwuru. “Maka m, ihe kachasị mma na web bụ mmụọ nke imekọ ihe ọnụ.
Agbanyeghị na anaghị m ebu amụma maka ọdịnihu, enwere m olile anya na iji ya, ihe ọmụma na ikike ya ga-emeghe ma dịịrị onye ọ bụla n'ime anyị iji nye anyị ohere ịga n'ihu na-agbanwe agbanwe, mepụta ma bido mgbanwe teknụzụ na-esote, nke anyị enweghị ike iche. «
Ọ na-agbakwụnye na:
“NFTs, ma ọ bụ ọrụ aka ma ọ bụ ihe okike dijitalụ dị ka nke a, bụ ihe ọkpụkpọ ọhụụ kachasị ọhụrụ na ụwa weebụ na usoro kacha mma kwesịrị ekwesị n’ebe ahụ. Tim Berners-Lee kwenyere na "nke a bụ ụzọ zuru oke iji wepụta mmalite Web." »You ga-aga nke ọma na ndekọ ndekọ na ọnọdụ nke ugbu a ọdịda nke ahịa NFT?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Tim Berners-Lee na-ere ahịa koodu koodu mbụ nke www